Ogaden News Agency (ONA) – Isku duwahaha jaaliyaadka S/Ogadeniya ee qarada Yurub oo Stockholm shir ugu qabtay Hawl-wadeenka Jaaliyadda
Isku duwahaha jaaliyaadka S/Ogadeniya ee qarada Yurub oo Stockholm shir ugu qabtay Hawl-wadeenka Jaaliyadda
Isku duwaha Jaaliyada Ogadenia ee Yurub mudane Cismaan Badal oo ka soo kicitimay magalada London aya waxa uu shirar abaabul oo baladhan u qaban doonaa Jaaliyada S/Ogadeniya ee Qaradan Yurub. Muadane Cismaan Badal ayaa kormeer shaqo iyo wacyi galin ah ku mari doona guuda ahan qaradan Yurub gaar ahaana wadamadan Skandvianka ah.
Wuxuu ugu horeyn ka qaybgalay shir maanta ka dhacay Stockholm oo ay ka soo qayb galeen hawl wadeenada iyo gudoomiyayaasha unugyada ee jaaliyada Sweden ka koobantahay. Waxaa kaloo goobjoog ka ahaa shirka mudane Rayaale Xaamud oo ka mid ah madaxda JWXO.
Isu-duwaha Yurub mudane Cismaan wuxuu ku soo bandhigay shirka hawl-wadeenka qorshihiisa iyo qaabka uu rabo inuu u shaqo galo. Markii laga dhagaystay qorshaha Isu-duwaha ayay hawl wadeenada jaaliyada Sweden aya soo dhaweeyeen socdaalka uu ku marayo mudane Cismaan badal Jaliyadka Somalida Ogadenia ee Yurub. Dood iyo fikrado badan oo la is waydaarsaday kadib waxaa la isku raacay in uu muadane Cismaan iyo wafdi lagu dari doono ay socdaal dheer ku kala bixiyaan guud ahaan gobalada kala duwan ee Jaaliyaadku ka jiraan, madaama Jaaliyada Sweden ka koobantahay unugyo kala duwan .
Hadaba socdaalkan ayaa la rajaynayaa inuu wax badan ku soo kordhin doono jaaliyada Sweden iyo guud ahaan Halganka hubaysan ee JWXO hogaaminayso.